Infinix S5 Lite, taleefanka casriga ah ee cusub ayaa horey loogu sii daayay shaashad daloola | Androidsis
Waxaa jira taleefan casri ah oo casri ah oo casri ah oo suuqa yaalla, waana kan Infinix S5 Lite. Qalabkan waxaa laga soo saaray Hindiya isagoo ah meel dhexdhexaad ah oo leh qiimo lacageed.
Marka lagu daro lahaanshaha guddi leh daloolka kamaraddaada sawir qaadaha ah, aaladda ayaa sidoo kale qalabaynaysa qayb kamarad gadaal ka kooban oo ka kooban saddex dareemayaal. Naqshadeynta, marka lagu daro, waa astaamaha aan ka helno moobiilka premium dhexdhexaad.
1 Infinix S5 Lite Features iyo tilmaamaha
Infinix S5 Lite Features iyo tilmaamaha
Shaashadda 'TFT screen' ee taleefankan ayaa ah qaab Infinity-O ah, kaas oo lagu sifeeyey inuu yahay shaashad buuxda oo daloolkeed ku jiro. Sawir qaadeheeda waa 6.6 inji, xalka waa HD + oo ah 1,600 x 720 pixels (20: 9).
Godka ku yaal geeska bidix ee kore ee guddiga wuxuu a 16 megapixel HDR + sawir qaade leh AI iyo f / 2.0 aperture. Kaamiradani waxay awood u leedahay inay ku qabato tallaallo wanaagsan xaaladaha iftiinka yar iyadoo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda Quad Bayer (4 1) Telefoonku wuxuu kaloo taageeraa quruxda wajiga ee wicitaanka fiidiyowga ee WhatsApp iyo emojis AR.
Sawirada ugu muhiimsan waxaa leh kamarad gadaal seddex ah, oo ka kooban a 16 MP dareeraha ugu weyn ee leh autofocus, 2 megapixel lens lens ah oo go'an iyo dareeraha AI. Waxay taageertaa qaabka bokeh, diiradda isku dhafan, ogaanshaha goobta AI, iyo FullHD + duubista fiidiyowga.
Processor-ka aad haysato ayaa ah Mediatek Helio P22 SoC, kaas oo leh sideed Cortex-A53 oo ka shaqeeya saacadaha ugu badan ee saacadda oo ah 2.0 GHz. Waxa kale oo jira 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah ballaadhinta kaydinta gudaha ah. Batariga hubiya in wax waliba dhaqaaqayaan waa 4,000 mAh. Furitaanka, waxaa jira akhristaha faraha faraha oo ku yaal daboolka dambe.
Infinix S5 Lite waxaa lagu qiimeeyaa Rs 7,999 gudaha Hindiya (~ € 100 ama $ 110). Midnight Black, Quetzal Cyan iyo Violet waa daabacadaha midabka ee Infinix S5 Lite horeyba loogu heli jiray. Taleefanka casriga ah ayaa laga iibsan karaa iyada oo loo marayo Flipkart oo ku taal waddanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Infinix S5 Lite waa midka dhexe ee rasmiga ah ee rasmiga ah kaas oo la imanaya shaashad daloollan iyo qiimo aad u jaban